"I-Lake House"...indawo yokuphumula - I-Airbnb
"I-Lake House"...indawo yokuphumula
Ocean Grove, Victoria, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Kerrie
ILake House" isogwini lweBlue Waters Lake.
Iyunithi isezingeni eliphansi lendlu inokubukwa okuhle nokufinyelela okuqondile echibini kanye nethrekhi yokuhamba.
Inegumbi lokuhlala lesimanje, elibanzi elinekhishi, igumbi lokulala kanye ne-ensuite. Kunengadi enhle enombono onokuthula phezu kwechibi kanye ne-alfresco ene-BBQ kagesi ne-webber bbq ezosetshenziswa izivakashi. UDon kanye noKerrie bahlala esitezi esiphezulu.
- Igumbi lokulala elibheke ichibi elinombhede wosayizi wendlovukazi, ifeni yophahla kanye nesitoreji esiningi.
- Igumbi lokuphumula elibanzi elinosofa abahlezi, itafula lokudlela nezihlalo, isikrini esikhulu esiyisicaba, i-smart tv kanye nesistimu ehlukanisayo yomoya enikeza ukufudumeza nokupholisa. Lokhu kubheke ngqo ingadi nechibi futhi.
- Ikhishi liyingxenye yendawo yokuhlala ehlinzeka ngesiqandisi esikhulu sefriji, i-microwave, usinki, izinto ezisetshenziswayo ezincane, izitsha nezinto zokusika. Kukhona i-BBQ kagesi ngaphansi kwe-alfresco yokupheka kanye ne-Webber barbecue ingahlinzekwa uma uyicela. Awekho amapuleti ashisayo noma ihhavini.
Akufanele kuphekwe ngaphakathi njengoba kune-alamu yentuthu phezu kwebhentshi.
- I-ensuite yesimanjemanje, ebanzi ingaphandle kwekamelo lokulala elinendawo yokuhamba enkulu, ishawa yamanzi, (izivakashi eziningi eziphawula kahle ngayo) okuyize nendlu yangasese.
- kunezihlalo otshanini ukuze ujabulele ukubuka futhi unendawo yakho ye-alfresco ebheke echibini. Kukhona itafula le-bbq nelangaphandle nezihlalo ozozisebenzisa.
- Ilineni elisezingeni eliphezulu, okokulala namathawula kuhlinzekwa.
Sicela uqaphele, akukho ukubhema ngaphakathi kweyunithi noma ngaphansi kwendawo ye-alfresco.
4.97 · 319 okushiwo abanye
ILake House isosebeni lweBlue Waters Lake futhi inokufinyelela okuqondile kumzila wokuhamba ngezinyawo nasechibini. I-Blue Waters Lake iyimfihlo efihliwe e-Ocean Grove. Igcwele impilo yezinyoni, kodwa inokuthula futhi ithule. Ifulethi elibheke enyakatho eliphansi, linendawo ebheke echibini.
"I-Lake House" iqhele ngamamitha angu-400 ukusuka emfuleni kanye nokuhamba imizuzu emithathu ukuya ogwini noma ezitolo.
Kunendlu yekhofi ewubukhazikhazi "The Groove" ekhoneni lekhofi elisheshayo lasekuseni. Edolobheni, ukuhamba ngemizuzu emi-3 nje kunezindawo zokudlela eziningi, okuhle kakhulu ukujabulela ukudla kwasekuseni, kwasemini noma kwakusihlwa.
Ngaphezu kwalokho kukhona ukukhetha okubanzi kwama-wineries ongavakashela ukuze unambitha nokudla.
Ulwandle e-Ocean Grove lude futhi luhle. Udume ngokubhukuda noma ukuhamba uhambo olude. Kukhona nomfula iBarwon, oqhele ngamamitha angama-400 kuphela. Ungajabulela ukuhamba, noma ulethe induku yakho futhi uyodoba uma uthanda.
I-Ocean Grove inezitolo ezimbili. Enye imaphakathi nedolobha. Lokhu kunoxhaxha lwamakhefi nezindawo zokudlela, izitolo zezimpahla zokugqoka nobucwebe, isitolo sezindaba, ikhemisi kanye nesitolo esikhulu sakwaColes.
Esinye, isikhungo sokuthenga esincane sinekhemisi kanye nesitolo esikhulu se-Safeway.
UDon kanye noKerrie bahlala esitezi esiphezulu. Bangakunikeza amathiphu ezinto ongazibona noma uzenze. Ziwumlayezo nje noma ucingo olukude uma udinga ukuxhumana nawo.
Kungenjalo ungaba nobumfihlo obuphelele futhi ungakuboni nhlobo .... noma yini oyikhethayo !
Hlola ezinye izinketho ezise- Ocean Grove namaphethelo